Ogow Doorka Faytamiin D Ee La Dagaalanka Covid 19
Thursday May 14, 2020 - 16:41:54 in Opinion
Daraasad ay samaysay hay’adda caafimaadka aduunku (WHO), waxa ay daboolka ka qaaday in heerka faytamiin D ee bulshooyinka wadamada caalamka qaar kamid ahi—uu aad u yaraa; gaar ahaanna dadka waaweyn ee ku kala nool wadamada Spain, Italy iyo Swetzerland. Sidaasi darteed dadka waaweyni waa mujtamaca ugu nugul qaadista caabuqa Covid-19. Dhanka kale, dumarka dhiigga caadadu uu ka istaagay iyaguna waa kuwo u nugul caabuqa Covid-19, sababta oo ah waxa meesha ka baxa hormoonada Estrogen iyo Progesterone; waxana ay saamayn ku yeeshaan hanaankii uu jidhku u qaadan lahaa macdanta Kaalshiyam iyo dheelitiridda duxda jidhka ku jirta, sidaasi darteed, faytamiin D wuxuu jidhka u sahlaa nuugista macdanta kaalshiyam. Hadaanu faytamiin D jirin kaalshiyam lama nuugayo; waxana dhacaya lafo khafiif (oesteoposis). Si kastaba ha ahaato’e, isticmaalka faytamiin D waxay jidhka ka caawineysaa inuu soo nuugo kaalshiyam ku filan, waxa adkaanaya lafaha; waxana awoodeysanaya difaaca jidhka. Khubarada Hay’adda caafimaadka aduunku waxa ay ku taliyeen in lagu dedaalo isticmaalka Faytamiin D, si looga hortago caabuqa Covid-19.
Daraasad la sameeyey markii xanuunkan Covid-19 uu bilaabmay, waxa la ogaaday in dadka geeska afrika ka yimid ee dalka Sweden ku nool, gaar ahaan Soomaalida, in ay yihiin kuwa xadiga faytamiin D ee dhiigooda ku jiraa uu aad u yar yahay marka lala barbar dhigo, itoobiyaanka, eretariyaanka iyo kiinyaanka kula nool dalka Sweden. Markay noqoto rag iyo dumar, faytamiin D wuxuu aad ugu yar ayahay dumarka. Taasi waxa inoo cadayneysa 16-kii qof ee ugu horeeyey ee u dhintay caabuqa Covid-19 dalka Sweden in lix kamid ahi ay noqdeen Soomaali; waxana loo aaneeyey laba arrimood oo kala ah isdhexgalka iyo cimilada
1) Dadka da’da ah (old). 2)Dadka qaba macaanka, dhiigkarka, kansarka, dadka duraygu ku soo noqnoqdo, dadka difaacoodu hooseeyo, Dadka HIV-ga qaba. 3) Dadka ku nool meelaha qoraxdu ay ku yartahay iwm.